Ceramic hafa hamolavola sy ny Product
Tonga soa eto amin'ny Our Company
OTHER Ceramic hamolavola SY PRODUCT
Manatsara kalitao sy hampihenana ny vola lany By be fampihenana ny fanangonan-karena ny sulfate, azo atao ny hahatratra ny fanatsarana eo amin'ny kalitaon'ny ny fitaratra sy ny fampihenana ny amin'ny tahan'ny tamy raha ampitahaina amin'ny vy-roller. Ny fused silica-roller manan-tena ambany dia ambany sy mafana conductivity no safidy tsara indrindra ho an'ny maso ny dingana annealing, manampy ambany-deformation fitaratra tsy misy microcracks sy ny adin-tsaina na ambany fitaratra kofehy. · Smooth ambonin'ny, mora ny mitsabo fanitso na firapotsy azôty The-fu ...
Silicon vy ambany annealing-roller
High quality ampiasaina amin'ny silisiôma vy taratasy famokarana vy Silicon annealing rollers dia tsara noho ny fitakiana ny annealing rafitra vy toy ny orinasa mpamokatra entana. Izany no ampiasaina mba hitondra ny asa annealing ny hafanana avo silisiôma vy taratasy, ary isan-karazany ny mari-pana dia 600-950 ° C. Ny table-roller dia natao mba hitsena ny dingana sy fepetra takiana no ampiasaina izay mitohy amin'ireo Kamroller ny format manan-tompo patented lavaka teknolojia farany, sy mialoha antoka malefaka lahateny. Ary ho etỳ ambonin'ny R ...
Fused Silica Roller ho an'ny faritra fiara anneal ...
Ao amin'ny fiara orinasa, Kamroller manolotra isan-karazany ny fametrahana mazava tsara singa sy ny vokatra. Noho ny ambony sy ny tsara milina hery sy ny herinaratra thermodynamics mampiavaka ny seramika, mpanamboatra fiara sy ny fiara faritra mpanamboatra dia miha-mampiasa fitaovana tanimanga, fa tsy ny metaly. Miasa miaraka amin'ny mpanjifa mba hanana azo antoka, mateza sy ny singa vidiny ambany. Isika hanome rollers noho ny fatana fandoroana ka fiara nohitsakitsahiko faritra, faritra mamokatra fiara maivana T ...
Fused silica Takela
Automotive hiondrika forming bobongolo
KAMROLLER Flat Andohalambon'i PRODUCTS
Fahadiovana avo Fused Silica Raw Material
KAMROLLER® no nitarika izao tontolo izao ny mpanamboatra ny teknolojia avo-seramika nanomboka tamin'ny 1988. Any Etazonia sy Shina, orinasa sy ny andrim-panjakana manome vokatra sy ny tolotra tsara ny mpanjifa manerana izao tontolo izao.
Shanghai Road, Xinyi ara-Toekarena - Zone Teknolojia Development, Xuzhou City, Jiangsu Province, Sina
7 andro isan-kerinandro avy amin'ny 9:00 maraina ka hatramin'ny 6:00 hariva
Fa ny fanontaniana momba ny vokatra na pricelist, Masìna ianao, avelao ny mailaka ho antsika Izy ary ho mifandray ao anatin'ny 24 ora